Raw 6-Paradol powder (27113-22-0) Nsukka - Phcoker
Paradol, nke a makwaara dị ka uzuzu Raw 6-Paradol, bụ ihe ọkụkụ na-arụ ọrụ nke mkpụrụ osisi Guinea (Aframomum melegueta ...... ..
ikike: 1560kg / ọnwa
Raw 6-Paradol powder (27113-22-0) Smmezi
Product Name Raw 6-Paradol ntụ ntụ
Chemical Aha Raw 6-Paradol ntụ ntụ; Paradol; 1- (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl) decan-3-one;
Klaasị ọgwụ ọjọọ A pụrụ ịdọrọ ọgwụ a na DMSO
molekụla Fnhazi C17H26O3
molekụla Wasatọ 278.392 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 278.188 g / mol
Mgbu Point 31 - 32 Celsius C
Agba White edozi ntụ ntụ
Sịkwa akwa Tigwe Mmiri, ọchịchịrị na 0 - 4 C maka obere oge (ụbọchị ruo izu) ma ọ bụ -20 C maka ogologo oge (ọnwa ruo afọ).
Raw 6-Paradol ntụ ntụ Antinye Ihe oriri -> Ndị na-eri nri
Ihe nkwụsị ọnwụ.
Raw 6-Paradol powder (27113-22-0) Nkọwa
Paradol, nke a makwaara dị ka 6-Paradol, bụ ihe ọkụkụ na-arụ ọrụ nke mkpụrụ osisi Guinea (Aframomum melegueta ma ọ bụ mkpụrụ paradaịs). A na-ahụkwa ya na ginger. A chọpụtawo paradol inwe antioxidant na antitumor na-akwalite utịp na ngosipụta nke òké. A na-eji ya eme ihe dị ka mmanụ dị oké mkpa iji nye spiciness.
6-Paradol ntụ ntụ (27113-22-0) Nhazi nke Action
Nchịkọta nke Paradol (6-paradol) (10 mg / kg) na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ Iba1 bụ mkpụrụ ndụ 1 na 3 ụbọchị mgbe ihe ịma aka ahụ gasịrị. Ọzọkwa, Paradol na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ Iba1-postive na mpaghara periischemic ọbụna mgbe 3 na-esote M / R. Paradol (6-paradol) na-egosipụta mmetụta kachasị mgbochi mgbochi ọtụtụ ogidi paradol na lipopolysaccharide-kpaliri BV2 microglia sitere na ụbụrụ òké, gụnyere 2, 4, 6, 8, na 10-paradol. Ọzọkwa, Paradol na-egosi njedebe kachasị ike nke analogues paradol a maara. Paradol na-egosipụtakwa oge kachasị elu na kọntaktị nke arụmọrụ na-adabere na nsonaazụ ndị e gosipụtara maka absorption nke ndị metabolites na ọmụmụ a.
Paradol (6) -paradol) na-adọta apoptosis na mkpụrụ ndụ cell carcinoma, KB, na-adabere n'ụdị dose. Paradol na-adọta apoptosis site na usoro nkwụsị-3-ndabere.
uru nke 6-Paradol ntụ ntụ (27113-22-0)
▪ 6-Paradol na antipyretic, bụ maka ọgwụ isi ọwụwa, ihe mgbu (ọrịa muscle, mgbarụ) na ọkụ ma ọ bụ naanị ya na ọgwụ ndị ọzọ.
▪ A na-ejikwa 6-Paradol na ọgwụ ndị ọzọ na-egbu mgbu iji merie ihe mgbu, ọrịa ogbu na nkwonkwo, oyi, na eze mgbu.
-atụ aro 6-Paradol ntụ ntụ (27113-22-0) Ọnụọgụ ọgwụ
Mkpụrụ ọgwụ ọnụ maka ndị okenye bụ 325 ka 650 mg niile 4 ruo 6 awa. Ụbọchị kachasị elu bụ 4 grams.
Nwatakịrị - nke a tụrụ aro bụ 10 ka 15 mg / kg ọ bụla 4 ruo 6 awa.
Ọ na-abịa dị ka mbadamba nkume na mmiri mmiri iji ọnụ na-ebu, na-enweghị nri.
mmetụta nke 6-Paradol ntụ ntụ (27113-22-0)
6-Paradol bụ onye na-abụghị opiate, Paradol na antipyretic, e nyere maka isi ọwụwa, ihe mgbu (ọrịa mgbu, nkpuchi) na ahụ ọkụ. N'aka nke ọzọ, o nwere ike inwe mmetụta ụfọdụ dị ka n'okpuru:
Okwute chacha acha
Ọkụ na-acha ọkụ na akụrụ